Imithombo Yezokuxhumana Ichazwe Ngekhofi | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 23, 2013 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ikhofi ingenye yalezi zinjabulo ezingakholeki empilweni yami engingakwazi ukwenza ngaphandle kwayo. Ngiphuza i-roast emnyama yaseFrance esanda kusiwa njengamanje kanye nomnandi wayo, ophekwe kumenzi wami we-stovetop espresso. Abangane bami abakhulu banesitolo sekhofi. Akukho engikuthandayo ngaphezu kokuthola enye indlu yekhofi engahlanganisiwe lapho ngisendleleni. Isikhathi esiningi lapho ngihlangana nomuntu, kusesitolo sekhofi. Ikhofi lidlulile ngaphezu kwesikhuthazi futhi manje seliyisiphuzo esihlotshaniswa nezinkumbulo eziningi ezinhle kimi.
Le infographic engezansi ivela eMarketplace Maven futhi yaphefumulelwa yi-ingenius Imithombo yezokuxhumana namaDonuts ngu-Three Ships Media eRaleigh.
Tags: ikhofiemakethe mavensocial mediaimithombo yezokuxhumana nekhofizokuxhumana kanye nama-donutsimikhumbi emithathu imidiya
Feb 25, 2013 ngo-6: 14 AM
Njengoba ngingumuntu ophuza ikhofi njalo futhi angikwazanga ukusebenza usuku lonke ngingenayo ngisho inkomishi eyodwa yekhofi, ngiyithola ikhazimula ngempela le "infographic". Kuneqiniso nje elingako kuyo. Siyabonga ngokwabelana nathi ngalokhu noDouglas.
Feb 25, 2013 ngo-9: 45 AM
Ngo-Apr 8, i-2013 ku-1: i-50 PM
Ngingumuntu ophuza itiye ngokwami ​​kepha lokho kungumbono omuhle kakhulu weDouglas. Kungase kudingeke ukuthi ngikuprinte lokho bese ngikwabelana nomama ngokuzayo lapho ngivakashile - mhlawumbe manje uzokuthola engikwenzayo LOL Oh futhi ngiyithanda kakhulu incazelo ye-Google + 🙂